के तपाईं कसैसँग नयाँ सम्बन्ध सुरू गर्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाइराख्नुहाेस् यी १० कुरा - ramechhapkhabar.com
के तपाईं कसैसँग नयाँ सम्बन्ध सुरू गर्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाइराख्नुहाेस् यी १० कुरा
समय फेरिएको छ । आजभोलिका युवाहरु जति छिटो कुनै सम्बन्धमा रहन मन पराउँछन्, सम्बन्धमा अलिकति मात्र पनि अमिलोपन देखिन थाल्यो भने त्यति नै छिटो टाढिन्छन् पनि । आजको प्रविधियुक्त समयमा आफ्नो प्रेमभाव देखाउन केवल फोन मात्रैको दूरी छ । तर, आफैंलाई र आफ्नो पार्टनरलाई दस प्रश्न मात्रै सोध्ने हो भने भविष्य पनि बर्बाद हुँदैन र समयको पनि बचत हुन जान्छ । सम्बन्ध बिच्छेदका विषयमा दखल राख्ने वकिल भेरोनेस फियोना शेक्लेटन र एक्सेटर विश्वविद्यालको शिक्षाविदको एक समूहका अनुसार, सम्बन्धमा रहन चाहनेलाई गम्भीर सम्बन्ध हुनुपूर्व केही प्रश्न सोध्नुपर्छ । ताकि, यसले उनीहरुको सम्बन्ध सुधार्न समेत सहयोग पुग्छ ।
सफल जोडी, पारिवारिक वकिल र सम्झौता गराउनेहरुको भनाइ के छ भने, जुन सम्बन्धमा मित्रता, सम्मान र आफ्नोबारे सबैकुरा शेयर हुन्छ, त्यो सम्बन्ध लामो समय टिक्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस विषयमा शेक्लेटन भन्छिन्– ‘सम्बन्ध लामो समयसम्म तब सफल हुन्छ, जब दुवै पार्टनरलाई खुसीसाथ सम्बन्ध कसरी बन्ने भन्ने थाहा हुन्छ ।’
राम्रो साथी नै राम्रो पार्टनर
अनुसन्धानकर्ताले ४३ यस्ता जोडीको अन्तर्वार्ता लिएका थिए, जसले विवाह गरेको दस वर्ष बितिसकेको थियो । यस अवधिमा उनीहरु अलग भइसकेका थिए । साथै, अन्य समलैंगिक र विषमलैंगिक १० जोडी पनि अनुसन्धानमा सहभागी थिए । उनीहरु कम्तिमा पनि १५ वर्षसम्म सँगै थिए ।
के सबै समान छन् ?
सर्वेक्षणका अनुसार धेरैजसो सफल जोडीले आफ्नो सम्बन्धको सुरुवात मित्रताबाट गर्छन् । बिस्तारै दुवैबीच घनिष्ठ सम्बन्ध बन्छ । यसकारण अनुसन्धानकर्ताको मान्यता छ कि, सम्बन्धको सुरुवात गर्नुपूर्व दुवै पार्टनरलाई सोधियोस्, के उनीहरुको सम्बन्ध मित्रतामा आधारित जस्तै छ ?
के हाम्राे मित्रता गहिरो छ ?
राम्रो सम्बन्ध हुँदा कैयौं समस्याको समयमा पनि कामहरु सहजै गर्न सकिने विशेषज्ञको भनाइ छ । जो जोडी सम्बन्धबाट पछि हट्छन् उनीहरुको मित्रतामा कमी रहने अध्ययन बताउँछ ।
के हाम्रा अपेक्षाहरु उचित छन् ?
अध्ययनमार्फत विशेषज्ञले सफल जोडीबीच विवाह र उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर उचित अपेक्षा रहेको पाए । सम्बन्ध चलाउन सजिलो नहुने कुरा उनीहरुलाई थाहा थियो । यसैकारण पनि कडा मेहनत गर्न पनि तयार देखिएका थिए ।
के आफूभन्दा आफ्नो पार्टनरलाई श्रेष्ठ हुन्छ ?
सम्बन्धमा सहानुभूति राख्नु राम्रो कुरा हो । तर, दयाभाव देखाउनुले प्रेम हुनमा समय लाग्ने विशेषज्ञको धारणा छ । प्रेम भइसकेपछि भने जोडीले एक–अर्कालाई आफूभन्दा पनि राम्रो ठान्न र आवश्यक परेको खण्डमा जेपनि गर्न तयार हुन्छन् ।
सम्बन्धलाई टिकाइराख्न केही गर्छौं त हामी ?
जसको सम्बन्ध लामो समयसम्म चल्यो, उनीहरु भन्छन्– ‘जति सकिन्छ दैनिक ससाना काम र रीति रिवाजमा एक–अर्कालाई सहयोग गर्छौं ।’
के कुनै विषयमा चर्चा र आफ्नो समस्या शेयर गर्छौं हामी ?
पूरै दिनको काम र जरुरी विषय वा कुनै गम्भीर समस्याबारे कुरा गर्न सक्नुपर्छ । यो अति आवश्यक कुरा हो । यसले सम्बन्ध अझै गहिरो बनाउन सकिन्छ ।
के हामी समस्यामा पनि काम गर्न प्रतिबद्ध हुन्छौं ?
स्थायी सम्बन्ध राख्नका लागि कम्तिमा समयसँगै हुने परिवर्तसँग अनुकूल रहौं । समस्याको समय आउँदा यदि दुवै एकसाथ रहन्छन् भने उनीहरुले आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउनेबारे सोच्छन् ।
के हामी आफ्ना मागप्रति नियन्त्रण वा कम गर्न सक्छौं ?
जीवनमा प्रेम गुम्ने डर, प्रेम सम्बन्ध, खराब आर्थिक स्थिति जस्ता दबाब आए भने कतिपय इच्छाहरु त्याग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्छन्, अनुसन्धानकर्ता । तर, आफ्ना इच्छामाथि नियन्त्रण गर्न सक्नु नै सम्बन्धको जित हो । अनि सम्बन्धका लागि यो सबै हुनु जरुरी पनि छ ।
के हामी मान्छेहरुको अगाडि पनि एक–अर्कालाई साथ दिन्छौं ?
जसलाई मन पराइन्छ, जसको साथ जीवन जिउने सपना सजाइन्छ, जसलाई हाम्रो परिवार र साथीभाइले पनि स्वीकार्छन् भने त्यस्तो सम्बन्धलाई आफ्नो बनाउन सबै चाहन्छन् । विशेषज्ञको मान्यता पनि यदि जोडीलाई परिवार र साथीभाइको साथ मिल्छ भने उनीहरुको सम्बन्ध बलियो बन्छ । यी सबै प्रश्नहरु थाहा पाइसकेपछि तपाईंहरुले पनि तय गर्नुहोस् कि, आफ्नो सम्बन्धमा आशा पलाउँछ या पलाउँदैन ।